Haydarojiinka degaanka u fiican: Fursada ugu wanaagsan ee Afrika inuu ku shidaaleeyo mustaqbalkiisa cagaaran?
'Haydarojiinka (curiye hawo ah) deegaanka u fiican ayaa keeni doonaa ka qeyb-galeyaal cusub iyo kala duwanaan suuqa tamarta, kala duwi doono waddooyinka iyo sahayda wuxuuna ka wareejin doonaa awoodda dadka yar ee hadda gacanta ku haaya una wareejin doonaa dad badan'.
Francesco La Camera, Agaasimaha Guud ee IRENA (Wakaalladda Tamarta La Cusboonaysiin karo ee Caalamiga ah).
Maadaama dhaqaalaha Afrika uu sii wado inuu sii wanaajiyo hamigooda deegaanka u fiican, haydarojiinka degaanka u fiican ayaa si sii kordheysa loogu arkaa mid muhiim u ah dhimista soo dejinta shidaalka iyo kiimikooyinka batroolka ku saleysan. Nasiib wanaag, Afrika waxay si gaar ah ugu muuqata meel ka faa'iideysan karo dhaqaalaha haydarojiinka degaanka u fiican.
Haydarojiinka degaanka u fiican waxa loola jeedaa ka soo saarista haydarojiin walxo aad u adag iyadoo la isticmaalayo hababka 'nadiifka' (aan kaarboon lahayn). Noocan soo saarista haydarojiin waxa ay isticmaashaa koronto si ay u kala qaybiso mulukiyuulka biyaha oo u beddesho unugyda uu ka kooban yahay. Marka habsocodkaan lagu qabto koronto laga soo saaro ilaha tamarta la cusboonaysiin karo, bixiska qiiqa ayaa noqonaayo eber. Tani waxaa loo yaqaan haydarojiinka degaanka u fiican (ama nadiif ah).
Haydarojiinka aan lahayn kaarboon, midka deegaanka u fiican wuxuu hadda yahay ilaa 0.1% ee soo saarka guud ee haydarojiin, laakiin tan ayaa la filayaa inay kor u kacdo maaddaama qiimaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo uu hoos u sii dhacaayo.
Si uu haydarojiinka nadiifka ah u noqdo mid si dhab ah ganacsi ahaan la tartami karo shidaalka laga soo saaro batroolka, waxay u baahan doontaa in kor loo qaado soo saarkiisa si degdeg.
96% ee haydarojiinka waxaa hadda la soo saaraa iyadoo la isticmaalayo batrool.
Waqtigan xaadirka ah, haydarojiinka deegaanka u fiican (midka cagaaran) waxaa lagu soo saaraa biyo oo koronto la marsiiyay, halka haydarojiinka caadiga ah (midka baluugga ah) waxaa lagu soo saaraa gaaska dabiiciga ah, taasoo ka dhigaysa nooca cagaarka ah ee nadiifka ah mid ilaa saddex jeer ka tamar waxtar leh soo saarkeeda.
Haydarojiin cagaaran, iyo waxyaabaha ka soo baxa, waxay tamar siin karaan baabuurta macdanta soo saaro, kuwa xamuulka qaada, basaska, tareenada, diyaaradaha iyo gaadiidka badda, waxaana loo isticmaali karaa in lagu soo saaro bir deegaanka u fiican, bacriminta deegaanka u fiican, iyo kiimikooyinka kale ee deegaanka u fiican.
Deegaanka u fiican waxaa loola jeedaa ganacsiga u fiican.
Caalami ahaan, suuqa haydarojiinka deegaanka u fiican waxaa la saadaalinayaa inuu sii koro ilaa ku dhawaad toban laab, sanadka 2021 wuxuu ahaa $444 milyan waxaana la rajeynayaa inuu noqdo $4.4 bilyan ka hor 2026, sida lagu sheegay warbixin la sii daayay Sebtembar oo ay soo saartay Cilmi-baarista iyo Suuqyada (Research and Markets), oo ah goob internet oo bixisa xogta suuqa iyo cilmi-baarista.
Kor u kaca maalgashiga haydarojiinka deegaanka u fiican waxaa kiciyay yoolalka yareynta kaarboonka ee adduunka oo dhan, iyadoo 90 waddan, oo ka dhigan 80% ee wax soo saarka guud ee adduunka, ay hadda ka go'an tahay bartilmaameedyada tamarta nadiifka ah - badi ahaan ka hor 2050, iyo Shiinaha iyo Hindiya ka hor 2060.
Ma fududa in la noqdo kuwo isticmaalo tamar deegaanka u fiicanaad
Maalgelin horudhac ah oo aad u badan ayaa loo baahan yahay si loo dejiyo kaabayaasha loo baahan yahay si loo soo saaro loona qaado haydarojiinka deegaanka u fiican. Ku dar kan tacriifada sare ee korontada kaasoo haydarojiinka deegaanka u fiican ka dhigaayo mid qaali ah marka loo barbardhigo kuwa kale.
Markii maalgelin lagu sameeyo qalabyada korontada mariyo biiyaha goobo ay ku badan yihiin tamarta dib loo cusboonaysiin karo, markaa waxaa la soo saari karaa koronto heer aad u tartan badan, kaasoo hoos u dhigayso qiimaha wax soo saarka haydarojiinka.
Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay sababtoo o ah qiimaha korontadu waxay u dhigantaa ilaa 60% ee wadarta qiimaha wax soo saarka haydarojiinka.
Mashruucyada hadda la wado
Iyadoo ay jiraan caqabadahaas, waxaa billowday waditaanka haydarojiinka deegaanka u fiican ee Afrika, iyadoo waddamo dhowr ah ay durba soo qabteen indhaha maalgashadayaasha.
Koonfurta Afrika waxay leedahay kheyraad dabiici ah oo badan iyo dhul la heli karo, taasoo ka dhigaysa meel fiican oo soo saari karto haydarojiinka deegaanka u fiican si ay u yareyso kaarboon badan uu soo saaro qaar badan oo ka mid ah warshadaheeda tamarta xoogga leh iyo si ay si degdeg ah uga faa'iideysato baahida caalamiga ah ee shidaalkaan.
Dhaqaalaha haydarojiinka waxaa la saadaalinayaa inuu wax-soo-saarka guud ee gudaha Koonfur Afrika ku dari doono inta u dhaxaysa $3.9 bilyan iyo $8.8 bilyan inta la gaarin 2050-ka, waxayna abuuri doontaa inta u dhexeysa 14,000 iyo 30,000 shaqo sannad kasta.
Hyphen Hydrogen Energy ayaa wax soo saarka ka bilaabi doonto 2026 gudaha Tsau ǁKhaeb National Park. Shirkaddu waxay sheegtay in afarta sano ku qaadan doonto dhisidda warshadda ay abuuri doonto 15,000 shaqo toos ah iyo 3,000 oo kale inta lagu jiro hawlgalada buuxa - iyadoo 90% ee shaqoyinkaas waban doonaan dadka deegaanka.
Hyphen waxay sidoo kaleba rabtaa inay Namibia ka sameyso mashruucii ugu horeeyay ee haydarojiinka deegaanka u fiican ee ugu wayn konfurta Afrika, maadaama uu wadanku leeyahay meelaha ugu kheyraadka badan aduunka ee laga helo dabaysha iyo qoraxda si tamar laga soo saaro.
Iyada oo leh kheyraad badan oo qorraxda iyo dabaysha ah, iyo xiisaha sii kordhaya ee tignoolajiyada haydarojiinka, Afrika waxay leedahay sheegasho adag inay 'qayb wayn" ku yeelato suuqa tamarta cusub.
Laga xaday Badda: Macnaha ay Saiko u tahay AfrikaHadda aqri